संशोधन प्रस्तावमा संसद्को सम्भावित अंकगणित
काठमाडौं । संसद्मा मंगलबार दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक परिपक्व हुन पाँच दिन लाग्छ । संसद्मा सैद्धान्तिक छलफलपछि संसद् नियमावलीको १२७ अनुसार सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न पाउनेछन् । संशोधन पेस गर्न..
काठमाडौं । संविधान संशोधनको तयारी भइरहेका वेला हिन्दूराष्ट्रका लागि विभिन्न समूह संगठित भएका छन् । हिन्दूराष्ट्र घोषणाका लागि दबाब दिन ती समूहले विभिन्न अभियान चलाउँदै छन् । हिन्दूराष्ट्रकै मुद्दामा राप्रपा नेपाल..
‘सुजातालाई ५० लाख दिन लालपुर्जा नचाहिने, भूकम्पपीडितलाई ५० हजार दिन लालपुर्जा चाहिने ?
भक्तपुर । लाभग्राहीको सूचीमा नाम समावेश भए पनि लालपुर्जा नभएर अनुदान सम्झौता गर्न नपाएपछि भक्तपुरका भूकम्पपीडितले राहत अनुदान सम्झौता प्रक्रिया पीडितको पक्षमा नभएको गुनासो गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा..
संविधान संशोधन प्रस्ताव रातारात दर्ता, ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला ४ नम्बर प्रदेशमा राखिने, यस्तो छ प्रस्ताव
काठमाडौं । सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । मंगलबार अबेर राती संसद्मा संशोधन प्र्रस्ताव दर्ता भएको हो । मन्त्रिपरिषदको बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्दै दर्ता गराउने..
​देशभर भ्रष्टाचारीलाई बहिस्कार गर्ने आन्दोलन
काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले भष्टाचार अन्त्यका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल निर्माण आन्दोलन समिति’ले मंगलबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा उनले भ्रष्टचारविरुद्ध..
काठमाडौं । योगगुरु रामदेवले पतञ्जली आयुर्वेद प्रालि, नेपालमा हालसम्म आफूले लगानी नै नगरेको दाबी गरेका छन् । रामदेवले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त प्रालिमा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र..
२ सय बिघा जग्गामा रामदेवको यस्तो योजना
काठमाडौं । पतन्जली योगपीठ हरिद्धार भारतका स्वामी रामदेवलाई जडीबुटी खेती तथा आयुर्वेद शिक्षण अस्पताल निमार्णका लागि भन्दै नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालयले २ सय बिघा जग्गा भाडामा दिने तयारी गरेको छ..
​राष्ट्रसंघमा कार्यरत दुई नेपाली डार्फरबाट अपहरित
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी नियोग, सुडानमा कार्यरत दुई नेपाली आइतबार अपहरणमा परेका छन्। हतियारधारी एक समूहले दुई नेपाली र एक सुडानीलाई अपहरण गरेको अन्तरार्ष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। हतियारधारी..
क्रसार उद्योगले वीपी राजमार्ग उच्च जोखिममा
काठमाडौं । वीपी राजमार्थको केही भाग सुनकोसीको तिरैतिर अवस्थित छ । यही क्षेत्रको विभिन्न स्थानका क्रसार उद्योग खोली राजमार्थको जग खोतल्ने काम बढ्दै गएको छ । अत्याधिक भार भएका टिपर वीपी..
रामेछाप र सोलखुम्बुको सिमानालाई केन्द्र बनाएर ५.६ रेक्टरस्केलको भुकम्प
काठमाडौं । रामेछाप र सोलखुम्बुको सिमानालाई केन्द्र बनाएर आज बिहान ५.६ रेक्टरस्केलको भुकम्प गएको छ । बिहान ५ बजेर २० मिनेटमा गएको उक्त भुकम्पको धक्का काठमाडौं उपत्यका तथा आसपारका अन्य जिल्लाहरुमा..
साझा बस चढेर सिंहदरबार हुँकिए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौँ । ‘साझा बसमा जो पनि चढ्दछ, किलिन्डरले दुई रुपियाँको टिकट काट्दछ‘ हामी पनि हुइँकिउँ बुइनी साझा बसैमा १’ कलाकार हरिवंश आचार्यले मञ्चमा आफ्नो पुरानो गीत गाउँदा पुल्चोकस्थित साझा यातायातको..
रामदेवसँग आशीर्वाद थाप्न नेताको लर्को
काठमाडौं । वीगन्जको सडकमा चलचित्रको पर्दाजस्तै तीव्रगतिमा दृश्यहरु फेरिदैछन् । विभिन्न पार्टीका झण्डाधारी कार्यकताहरु एकपछि अर्को गरी सडकमा झुम्मिएका छन्, यँहा आउने आफ्ना ठूला नेतालाई स्वागत गर्न । सडकमा फरक..
क्युबाका पूर्व राष्ट्रपति कास्ट्रोको निधन, फिडेल कास्ट्रोको जीवनी सहित
एजेन्सी । क्युबाका पूर्व राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रोको निधन भएको त्यहाँको सरकारी टेलिभिजनले घोषणा गरेको छ। उनी ९० वर्षका थिए। उनका भाइ समेत रहेका वर्तमान राष्ट्रपति राउलले कास्ट्रोको निधन भएको घोषणा गरेका..
​कपिलवस्तुमा शुरु भयो ५०० र १००० दरका भारु साट्ने ब्यवस्था
काठमाडौं । भारत सरकारले पाँच सय र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको दुई सातापछि मात्र कपिलवस्तुमा भारु नोट साट्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तौलिहवा शाखाले सर्वसाधारणलाई नोट साट्ने..
मध्यराति युवतीमाथि ललितपुरमा सामूहिक बलात्कार
काठमाडौं । ललितपुर इमाडोलमा बुधबार राति २० वर्षीय युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ । प्रेमीसँग हिडिरहेका बेला मोटरसाइकलमा आएका तीन जनाको समूहले युवतीलाई नियन्त्रणमा लिएर बलात्कार गरेको ललितपुर प्रहरीले जनाएको छ..
मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्न एमाले सक्रिय
काठमाडौं । सरकारले संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउन र मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालको संविधानको कही धारामा सामान्य संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको बेला खड्ग ओली अध्यक्ष रहेको..
विदेशी नागरिक नेपालमा अपराधमा संलग्न, १६ महिनामा ३ सयलाई देश–निकाला
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले १६ महिनाको अवधिमा ३ सय विदेशी नागरिकलाई नेपाल फिर्ता हुन नपाउने गरी देश–निकाला गरेको छ । लागूऔषध कारोबार, जाली नोट तस्करी, चोरीडकैती, मानव ओसारपसार, अवैध कल बाइपास,..
काठमाडौँ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक तथा नयाँ शक्ति नेपालका नेता ऋषिदेव भट्टराईलाई बुधवार २० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ..
३९ लाख सरकारी पैसा जुवामा हारेर गाविससचिव बेपत्ता
काठमाडौ । गाविसका सचिवले कति पैसा हिनामिना गर्न सक्छन्– एक, दुई लाख वा दश लाख रु होइन, एकैपटक ३९ लाख झ्वाम पार्न सक्छन्, त्यो पनि जुवाको खालमा । डोटीका पोखरी र..
सांसदै कारण रोकियो १० अर्ब २० करोड
काठमाडौं । समानुपातिक सांसदहरुले तोकिएको समयअवधिमा कार्यक्रम छनोट नगर्दा चालू आर्थिक वषको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको १० अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा..
महाकालीको पानी कब्जा गर्ने भारतीय प्रस्ताव
काठमाडौ । भारतले महाकाली नदीको लगभग सम्पूर्ण पानीमा आफ्नो कब्जा हुने गरी पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रस्ताव गरेको छ । भारतको प्रस्तावलाई नेपालले स्वीकार गरे महाकाली नदीको..
​ग्याँस पड्किँदा भोजपुर बजारमा भीषण आगलागी, १५ भन्दा बढी पसल जले, आगो अझै नियन्त्रणमा आएन
भोजपुर – ग्याँस पड्किँदा भोजपुर जिल्लाको सदरमुकाम भोजपुरबजारमा भीषण आगलागी भएको छ । आज साँझ पाँच बजे बजारको भोटेपसलस्थित नीलम ज्वेलर्समा ग्याँस पड्केपछि बजारमा आगो लागेको हो । अहिलेसम्म आगलागीबाट १५..
लोकमान सिंह कार्कीकै योजनामा अख्तियारका ४ आयुक्तविरुद्व मुद्दा
काठमाडौं । महाभियोगका कारण प्रमुख आयुक्तबाट निलम्बित लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकको योजनामा अन्य ४ आयुक्तविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । नागार्जुन नगरपालिकामा बस्ने दक्षबहादुर क्षत्रीलाई अघि..
भारतले भन्यो : कालो धनको रुपमा भारु नसाटिने ग्यारेण्टी के ?
काठमाडौं । नेपालसँग रहेको भारतीय रुपैयाँ साट्नका लागि भारतले कालो धनको रुपमा भारु नसाटिने ग्यारेण्टी माग गरेको छ । नेपाली नागरिकले २५ हजारसम्म भारतीय रुपैंयाँ राख्न पाउने व्यवस्था भएकोले कम्तीमा..
​आईपिओ आबेदन गर्दा बाँकी पैसा र नगद लाभांश नलिने पाँच बर्ष पुराना अर्बौ रुपैयाँ अब के हुन्छ ?
काठमाडौं । साधारण सेयरमा आबेदन गर्दा सेयर नपरी बाँकी रहेको पैसा पाँच बर्षदेखि पैसा फिर्ता अब फ्रिज हुँदैछ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सबै सुचिकृत कम्पनीहरुलाई परिपत्र गरी लगानीकर्ताले फिर्ता नलिएको पाँच..
हो, प्रतिबन्धित भारू नसाटिन सक्छ : अर्थ मन्त्रालय
काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाहिर रहेका पाँच सय र हजारका भारु नोट सटही हुनेमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू विश्वस्त छैनन् । आफ्नो मुद्राबारे निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित देशमा मात्रै निहित..
नेपालमा प्रतिबन्धित भारु मौज्जाद १५ अर्व रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाली बजारमा भारू ५०० र १००० का १५ अर्व रुपैयाँ बराबरको नोट रहेको अनुमान गरिएको छ । भारतले प्रतिबन्ध लगाएका यी नोटहरु नेपाली बजारमा १५ अर्व रुपैयाँ बराबरको..
चीनले माग्यो, ‘वान बेल्ट वान रोड’ बारे नेपालको धारणा
काठमाडौं । चीनले अघि बढाएको ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणाबारे नेपाल सरकारको ठोस धारणा बुझ्न चीनको एक सरकारी प्रतिनिधीमण्डल नेपाल भ्रमणमा आएको छ । चीनले आफू र एसिया, युरोप र अफ्रिकाबीच..
काठमाडौं । नेपालमा रहेको पाँच सय र हजार दरका भारतीय रुपैयाँको सटही सुविधा दिन रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई) ले अस्वीकार गरेको छ। यससँगै सर्वसाधारणसँग रहेको दसौं अर्ब भारतीय रुपैयाँ..
​भारुमा प्रतिवन्ध लागेपछि नेपाली नागरिक पक्राउ पर्न थाले, दुई लाख बोक्ने पनि हिरासतमा
पर्सा। स्रोत खुलाउन नसकेको ठुलो परिमाणको रकमसहित दुईजना युवकलाई गएराति प्रहरीले वीरगन्जको रजतजयन्ती चोकबाट पक्राउ गरेको छ । भारत सरकारले प्रतिवन्ध लगाएपछि नेपालले पनि कारोबारमा बन्देज लगाएको भारु प्रहरीले वरामत गरेको..
Results 1994: You are at page 41 of 67